Izisombululo zaManzi okusela - iShanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
Umgangatho wamanzi okusela ubonakalisa ulwamkelo lwamanzi okusetyenziswa ngabantu. Umgangatho wamanzi uxhomekeke kubume bamanzi obuphenjelelwa yinkqubo yendalo kunye nemisebenzi yabantu. Umgangatho wamanzi ubonakaliswa ngesiseko seeparameter zamanzi, kwaye impilo yabantu isemngciphekweni ukuba amaxabiso agqitha kwimida eyamkelekileyo. Iiarhente ezahlukeneyo ezinje nge-WHO kunye namaZiko oLawulo lweZifo (i-CDC) zibeka imigangatho yokuvezwa okanye imida ekhuselekileyo yokungcola kwamachiza emanzini okusela. Umbono oqhelekileyo malunga namanzi kukuba amanzi acocekileyo ngamanzi akumgangatho olungileyo abonisa umsantsa wolwazi malunga nobukho bezi zinto emanzini. Ukuqinisekisa ubukho nolawulo oluzinzileyo lwamanzi akumgangatho olungileyo lubekwe njengenye yeeNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo (SDGs) kwaye ngumceli mngeni kubenzi bemigaqo-nkqubo kunye neengcali zaManzi, ezococeko nococeko (WASH), ngakumbi xa kutshintsha iimeko zemozulu, ziyanda Abemi, intlupheko, kunye nefuthe elibi lokukhula komntu.
Kule meko ibaluleke kangaka, i-BOQU ngokuqinisekileyo kufuneka yenze iinzame kumgangatho wamanzi okusela, iqela lethu le-R & D liphuhlise izixhobo zetekhnoloji ephezulu yokulinganisa umgangatho wamanzi ngokuchanekileyo, ezi mveliso bezisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela.
4.1 Isityalo samanzi okusela eKorea
Usebenzisa i-intanethi yokuhlaziya ukungasebenzi kunye nesenzi kwinkqubo yokusela
4.2 Isityalo samanzi eselwayo ePhilippines
Iifayile ezintlanu zemitha yentsalela yeklorine kunye nee-2 ii-pcs zemitha yokuhamba kweseli yohlobo lokujonga esweni komgangatho wamanzi okusela.
I-ZDYG-2088YT yi-Intanethi ye-Turbidity Meter ekwi-intanethi ene-flow cell sensor, iyathandwa isetyenziselwa isicelo samanzi okusela, kuba amanzi okusela afuna umlinganiselo ophantsi wethamo elingaphantsi Ukuchaneka kuluhlu olusezantsi.
I-CL-2059A ngumgaqo wevolthi oshiyekileyo Imitha yeChlorine eseleyo, ine-0 ~ 20mg / L kunye no-0 ~ 100mg / L kuluhlu lokukhetha.
I-ZDYG-2088YT Umhlalutyi weTurbidity kwi-Intanethi
I-ZDYG-2088-02 Woluvo online Turbidity
I-CL-2059A Intsalela ekhutshelweyo yeklorine yokuhlaziya
I-CL-2059-01 Intsalela ekwi-intanethi eseleyo kwi-Intanethi